मस्तिष्कका लागी अत्यन्तै खराब छन् यी ५ प्रकारका खाना, कतै तपाईले त खानुभएको छैन ? – Patrika Nepal
मस्तिष्कका लागी अत्यन्तै खराब छन् यी ५ प्रकारका खाना, कतै तपाईले त खानुभएको छैन ?
काठमाडौँ । हामी सबै राम्रोसँग जान्छौँ कि मस्तिष्क हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण अंग हो । हाम्रो शरीरको सबै क्रियाकलापलाई मस्तिष्क नियन्त्रण गर्दछ। तर के तपाई तपाईको मस्तिष्कको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुहुन्छ त ? तर होइन किनकी तपाई त्यस्ता खाद्यपदार्थको भरपुर मात्रामा सेवन गर्नुहुन्छ जसलाई खानाले मस्तिष्क अत्यन्तै खराब हुने गर्दछ।
यी पेय पदार्थ मा रहेको फुक्ट्रोज को उच्च सेवनले सिक्न को क्षमता, स्मृति, समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य र मस्तिष्क मा नयाँ न्यूरॉन्स को गठन कम गर्न मा उपयोगी हुन्छ। यसले मस्तिष्कमा घाउँ बढाउन को लागी कार्य गर्न सक्छ। त्यसैले, तपाइँको दिमाग लाई फिट राख्न र मस्तिष्क को स्वास्थ्य को बनाए राखन को लागी, तपाइँ यी पेय पदार्थहरु को उपभोग बाट बच्नु पर्छ।
व्यस्त जीवनशैली को कारण, धेरै मानिसहरु सस, ड्रेसिंग पास्ता र पूर्व(पकाएको खाना आफ्नो आहार को भाग को रूप मा उपभोग गर्छन्। यी सबै खानेकुराले तपाइँको मस्तिष्कलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ। तसर्थ, दिमागमा शान्ति ल्याउन र सकारात्मक सोच बढाउन, नियमित र घरेलु सन्तुलित आहार गर्नुपर्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि माछा खाना स्वास्थ्य को लागी लाभदायक छ। यो किनभने माछा मा ओमेगा ३ फैटी एसिड, भिटामिन बी १२, फलाम सहित अन्य पोषक तत्वहरु को राम्रो मात्रा हुन्छ। तर माछा को केहि प्रकार को माछामा पारा (mercury) उच्च मात्रा मा हुन्छन्।
पारा मस्तिष्क स्वास्थ्य को लागी हानिकारक छ। तसर्थ, जुन माछामा पारा को उच्च मात्रा हुन्छ त्यो मस्तिष्क को लागी खराब खाना मानिन्छ। यस्तो स्थिति बाट बच्न को लागी, ट्यूना, तलवार माछा, सुन्तला रफी, म्याकेरल, शार्क र टाइलफिश थोरै मात्रा मा उपभोग गर्नुपर्छ। किनभने यस्ता माछामा अन्य पोषक तत्वहरु साथै पारा पनि यी माछा मा उपस्थित हुन्छ।
हेल्थअन बक्सबाट नयाँपुस्ताका लागि अनुवाद गरिएको सामाग्री
Prevडब्लुएचओले भन्यो, ‘कोरोना नयाँ भेरियन्टको जोखिम छैन’
Nextउपसचिवको ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ वटा बैंकमा पैसा
साउदीमा अवैधानिक कामदारलाई ब्यापक धरपकड ! एक हप्तामै समातिए झन्डै १४ हजार
पोखराबाट झण्डै दुई लाख अमेरिकी डलरसहित एक जना पक्राउ…